Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Rom 6:1-23
Ndị e mere baptizim ka ha na-ebi ndụ ọhụrụ (1-11)
Unu ekwela ka mmehie na-achị ahụ́ unu (12-14)
Unu kwụsịrị ịgbara mmehie ohu gbawara Chineke ohu (15-23)
Ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ; onyinye Chineke bụ ndụ (23)
6 Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Ànyị ka ga na-eme mmehie ka amara baa ụba? 2 Mbanụ! Ebe ọ bụ na mmehie anaghịzi achị anyị,+ gịnị mere anyị ga-eji ka nọrọ na-eme mmehie?+ 3 Ka ọ̀ bụ na unu amaghị na anyị niile ndị e mere baptizim ka anyị na Kraịst Jizọs dịrị n’otu,+ e mere anyị baptizim ka anyị nwụọ ụdị ọnwụ ọ nwụrụ?+ 4 N’ihi ya, e si na baptizim ahụ e mere anyị ka anyị nwụọ ụdị ọnwụ ọ nwụrụ likọọ anyị na ya,+ ka anyị wee na-ebi ndụ ọhụrụ otú ahụ e si n’ebube nke Nna ahụ kpọlite Kraịst n’ọnwụ.+ 5 Ọ bụrụ na anyị na ya dị n’otu maka na anyị nwụrụ ụdị ọnwụ ọ nwụrụ,+ n’eziokwu, anyị na ya ga-adịkwa n’otu maka na a ga-akpọlite anyị n’ọnwụ otú e si kpọlite ya n’ọnwụ.+ 6 N’ihi na anyị ma na a kpọgidere ya na àgwà ochie anyị n’osisi,+ ka e wee mee ka ahụ́ anyị nke na-eme mmehie kwụsị ịrụ ọrụ,+ ka anyị ghara ịnọ na-agbara mmehie ohu.+ 7 N’ihi na onye nwụrụ anwụ enwerela onwe ya ná* mmehie ya. 8 Ọ bụrụ na anyị na Kraịst nwụrụ, anyị kweere na anyị na ya ga-adịkwa ndụ. 9 N’ihi na anyị ma na ugbu a e sirila n’ọnwụ kpọlite Kraịst,+ ọ naghịzi anwụ anwụ;+ ọnwụ abụkwaghị nna ya ukwu. 10 N’ihi na ọnwụ ọ nwụrụ, ọ nwụrụ ya naanị otu ugboro ka o wepụ mmehie.+ Ma ndụ ọ dị, ọ na-adịrị ya Chineke. 11 Ununwa, werekwanụ onwe unu ka ndị nwụrụ anwụ n’ihe gbasara mmehie ma bụrụ ndị si n’aka Kraịst Jizọs na-adịrị Chineke ndụ.+ 12 N’ihi ya, unu ekwela ka mmehie bụrụ eze na-achị ahụ́ unu nke na-anwụ anwụ,+ unu ewee na-eme ihe ahụ́ unu chọrọ. 13 Unu enyefekwala mmehie ahụ́ unu ka ọ bụrụ ihe unu ji eme ajọ omume, kama nyefeenụ Chineke onwe unu dị ka ndị si n’ọnwụ bilie wee dịrị ndụ. Nyefeekwanụ Chineke ahụ́ unu ka ọ bụrụ ihe unu ji eme ezi omume.+ 14 Unu ekwela ka mmehie bụrụ nna unu ukwu ebe ọ bụ na ọ bụghị iwu na-achị unu,+ kama ọ bụ amara na-achị unu.+ 15 Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Ànyị kwesịrị ime mmehie maka na ọ bụghị iwu na-achị anyị kama ọ bụ amara na-achị anyị?+ Mbanụ! 16 Ọ̀ bụ na unu amaghị na ọ bụrụ na unu enyefee onye ọ bụla onwe unu ka unu na-erubere ya isi, unu na-agbara ya ohu maka na unu na-erubere ya isi?+ N’ihi ya, ọ bụrụ na unu na-agbara mmehie ohu,+ ọ ga-akpatara unu ọnwụ.+ Ma ọ bụrụ na unu na-agbara Chineke ohu ma na-erubere ya isi, unu ga-abụ ndị ezi omume. 17 Ma m na-ekele Chineke na n’agbanyeghị na unu na-agbaburu mmehie ohu, unu jizi obi unu na-erubere Chineke isi ma na-eme ihe ọ kụziiri* unu. 18 N’eziokwu, ebe ọ bụ na e mere ka unu kwụsị ịgbara mmehie ohu,+ unu na-agbaziri ezi omume ohu.+ 19 Ana m agwa unu okwu otú mmadụ ga-aghọta ya maka na mmehie emeela ka ahụ́ unu ghara ịdị ike. Otú ahụ unu nyefere adịghị ọcha na mmebi iwu ahụ́ unu ka unu bụrụ ohu ha, unu wee na-emebi iwu, nyefeekwanụ ezi omume ahụ́ unu ugbu a ka unu wee bụrụ ohu ya, ka ihe unu na-eme wee bụrụ ihe dị nsọ.+ 20 N’ihi na n’oge unu na-agbara mmehie ohu, ezi omume anaghị achị unu. 21 Oleezi mkpụrụ unu nọ na-amị n’oge ahụ? Ha bụ ihe ndị na-eme unu ihere ugbu a. N’ihi na ihe ndị ahụ na-akpata ọnwụ.+ 22 Ma, ebe ọ bụ na e meela ka unu kwụsị ịgbara mmehie ohu ma na-agbara Chineke ohu, mkpụrụ unu na-amị bụ ndụ dị nsọ unu na-ebi,+ ọ ga-emekwa ka unu nweta ndụ ebighị ebi.+ 23 N’ihi na ụgwọ ọrụ mmehie na-akwụ bụ ọnwụ,+ ma onyinye Chineke si n’aka Kraịst Jizọs Onyenwe anyị+ na-enye bụ ndụ ebighị ebi.+
^ Ma ọ bụ “a tọpụla onye nwụrụ anwụ ná; a gbagharala onye nwụrụ anwụ.”
^ Ma ọ bụ “na-erube isi n’ụdị ozizi e nyefere.”